I-FilmLight ikhanyisa ukuzibophezela komphakathi wokudala waseJapan e-Inter BEE 2018 - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - I-NAB BONISA I-LIVE
Ikhaya » Izindaba » I-FilmLight ikhanyisa ukuzibophezela kumphakathi wokudala waseJapan ku-Inter BEE 2018
I-FilmLight ikhanyisa ukuzibophezela kumphakathi wokudala waseJapan ku-Inter BEE 2018
Igatsha laseJapan leFilimuLight, iFilimuLight KK, ukukhombisa amandla weBaselight v5
[LONDON - 08 Novemba 2018]: IFilimuLight izokhombisa ukuzinikela kwayo kwezobuchwepheshe nasekwenzeni ubuchwepheshe ekusakazweni kwethelevishini laseJapan kanye nokukhiqizwa kwangemuva ngohlelo lwayo e-Inter BEE 2018 (Makuhari Messe, Tokyo, 14-16 Novemba, #3311). Lokhu kufaka isikhumbuzo seminyaka emihlanu sehhovisi leFilimuLight eTokyo, futhi kunikeza ithuba lokukhombisa inguqulo yakamuva yesiteji sokulinganisa imibala neFilimuLight, iBaselight v5, yemakethe yaseJapan.
"Ama-movie nethelevishini ye-premium abaluleke kakhulu eJapan, ngakho-ke kubalulekile ukuthi abasebenzisi bamathuluzi ethu okudala asekelwa kahle," kusho uKoichi Matsui, inhloko yeFilimuLight KK. "Ukuba nethimba lokuthengisa nokusekela enhliziyweni yomkhakha waseJapan kuyimpumelelo enkulu phakathi kwamakhasimende ethu abalulekile, futhi ngijabule kakhulu ukuqhubekisela phambili ubudlelwano obuqondile namakhasimende ethu e-Inter BEE kulo nyaka."
Ukukhishwa kwakamuva, i-Baselight v5, kunikeza izici ezintsha eziphoqayo ezisiza ukuhambisa ukuhamba komsebenzi okuyinkimbinkimbi kakhulu futhi okuchitha isikhathi kokubili ngaphakathi kwe-grading suite futhi ngokubambisana nokuhlela, i-VFX ne-360˚ VR. I-toolkit efanayo yesoftware isetshenzisiwe kulo lonke uhla lomkhiqizo, kusukela ekuboneni kwe-Prelight yokusetha okusekwe, uhlelo lwe-Daylight dailies nohlu olukhulayo lweBaselight Editions lokuhlela kanye ne-VFX, kanye neziteshi eziphakeme zeBaselight.
Izici ezintsha zifaka i-branching ehlakaniphile, okusho ukuthi opharetha abahlukene manje sebengasebenza endaweni efanayo ngasikhathi sinye, kungaba ukwenza imisebenzi ethile noma ukudala ukuhambisa okuningi.
Nge-HDR ngesihloko esishisayo, ukusebenza okusha kweBaselight kuhloswe futhi ukuthuthukisa ukubukeka ngaphakathi kwebanga elandisiwe kanye ne-color gamut, engagcinwa ngokwethembeka kulo lonke ubuningi bezindlela zokuthumela ezilindelwe namuhla. I-Boost Range, ngokwesibonelo, iyithuluzi elizenzakalelayo lokukhulisa uhla olushukumisayo lwesithombe kusuka ku-SDR kuya ku-HDR isebenzisa ukucubungula okuyinkimbinkimbi kwendawo ukufezekisa ukubukeka kwemvelo, kuyilapho i-Tevelop Highlight isebenzisa ukuhlaziya okuvama ukugwema ukubekwa obala okukhulu.
UToei Digital Lab eTokyo usanda kuthenga uhlelo olungeziwe lweBaselight TWO oluqondiswe kwimikhiqizo ye-TV enjengale yeNetflix, NHK nezinye izinhlelo ze-4K / UHD.
"I-Baselight v5 ibeka yonke imiqondo esezandleni zomlondolozi we-colourist wokugaya kanye ne-VFX," kusho uSoichi Satake, oyi-Senior Colourist kwaToei Digital Lab. "Ngokwesisekelo seBheli elisha, ngokwesibonelo, singakwazi ukukhiqiza kabusha isithombe esisitholile ngokulungisa ukuvezwa kwekhamera kusethi. Ukulawulwa kwezithombe ezigqamile kusheshe futhi kube lula, ikakhulukazi ngemithunzi ejulile. ”
"Ukwesekwa kweFilimuLight's 24 / 365 kusiza olukhulu kithi, ikakhulukazi amandla akude wokuxilonga," wengeza. “Ukuhamba kwethu komsebenzi eJapan kwesinye isikhathi kuyehlukahluka njengakwakwamanye amazwe kepha iqembu leFilimuLight liyazazi izidingo zethu futhi lithuthukisa izici zokuhlangabezana nalokho esikudingayo. IFilimuLight isebenza ngokufutheka ngayo yonke into emayenziwe, ukuze ngithole iBaselight ivela ngokushesha ukuze ihambisane nezidingo zethu ezihlala zivela. ”
I-Baselight v5 izokhonjiswa ohlelweni lwe-Baselight TWO futhi ngaphakathi kwe-Baselight Editions ku-booth 3311 ehholo 3 e-Inter BEE 2018.
Ama-Editions Editions I-Baselight v5 Ukufakwa kombala amathuluzi okudala uchwepheshe banamuhla ukukhanya kwemini ifilimu amagatsha ahlakaniphileToei Digital Lab I-Inter BEE 2018 japan Koichi Matsui Ama-Marcomms we-MKM Ukuxhumana kweMKM Marketing I-NetFlix NHK ukukhiqizwa kokuthunyelwe Qalisa USoichi Satake lula ukuhamba komsebenzi okuyinkimbinkimbi Tokyo VFX	2018-11-08
Ngaphambilini: Ukubandakanya Abalaleli Ababukhoma - Amathimba, Abadlali, Abathandi -Nakuba kunjalo MANJE
Olandelayo: I-ATEME Inika amandla i-VSTV K + ukuze kukhuliswe ukugcinwa kwe-Bandwidth kanye neRevenue